MyanmarCarsDB.com ၏ လေးစားအပ်ပါသော Customer များသို့.. | CarsDB
MyanmarCarsDB.com ၏ လေးစားအပ်ပါသော Customer...
MyanmarCarsDB.com ၏ လေးစားအပ်ပါသော Customer များသို့..
MyanmarCarsDB.com တွင် ကားအရောင်းအဝယ်ပြုလုပ်နေသော Customer များကို အခြားသော နိုင်ငံရပ်ခြားရှိ Car Company များမှ Marketing သမားများမှ ဖုန်းဆက်၍လည်းကောင်း၊ Email ဖြင့်ဆက်သွယ်၍လည်းကောင်း Marketing ဆင်းခြင်းများ ဆောင်ရွက်နေကြသည်ကို Customer များမှ ပြန်လည်ပြောပြသဖြင့် သိရပါသည်.။
အဆိုပါ ကုမ္ပဏီများ၏ Marketing သမားများ ဆက်သွယ်ခြင်းသည်MyanmarCarsDB.com နှင့် လုံးဝ (လုံးဝ) ပတ်သက်မှုမရှိဘဲ အခြားသော ကုမ္ပဏီများမှ ဆက်သွယ်ခြင်းသာဖြစ်ပါသည်.။ MyanmarCarsDB ၏ Customer များ စိတ်အနှောင့်အယှက်ကင်းစွာ လုပ်ငန်းများဆောင်ရွက်နိုင်စေရန် အဆိုပါကုမ္ပဏီများ၏ တာဝန်ရှိသူများသို့ ဆက်သွယ်၍ ဆက်လက်ဆောင်ရွက်လျှက်ရှိပါသည်.။
MyanmarCarsDB ၏ Customer များအနေနှင့် ထိုသို့သော ဖုန်းများမကြာခဏဆက်ခြင်း၊ Email များပို့ခြင်း စသည်တို့ ကြုံတွေ့ရ၍ စိတ်အနှောင့်အယှက်ဖြစ်ပါက ဆက်သွယ်သောဖုန်းများကို Black list ထည့်သွင်းခြင်း၊ Email များကို Spam အဖြစ်ထည့်သွင်းခြင်း စသည်တို့ ပြုလုပ်ကြပါရန် လေးစားစွာ တိုက်တွန်းအပ်ပါသည်.။
To All Valued Users of MyanmarCarsDB.com,
Recently, it has come to our attention thatanumber of telemarketing staff from overseas car auction companies/car exporters have been contacting our valued MyanmarCarsDB users through email and phone - multiple timesaweek. Due to such telemarketing activities, most of our users are left seriously frustrated.
With that, we would like to, hereby, clarify that such calls and email activities are solely done by some third-party companies. MyanmarCarsDB.com is not in relation with any of those annoying marketing activities.
Since it is also impossible not to display phone or email when sellingacar, part of our users’ information has to be public - and therefore, often being exploited by telemarketers.
As an immediate solution to this issue, we are now trying to get in touch with the management of those companies to make sure they will stop annoying activities to our users. On your end, we would also like to urge all our users to blacklist such pesky emails and phone numbers to prevent against annoying marketing activities.
Thanks again for continuous support to MyanmarCarsDB.com and we wish to provide you with even better services in future.
MyanmarCarsDB.com တှငျ ကားအရောငျးအဝယျပွုလုပျနသေော Customer မြားကို အခွားသော နိုငျငံရပျခွားရှိ Car Company မြားမှ Marketing သမားမြားမှ ဖုနျးဆကျ၍လညျးကောငျး၊ Email ဖွငျ့ဆကျသှယျ၍လညျးကောငျး Marketing ဆငျးခွငျးမြား ဆောငျရှကျနကွေသညျကို Customer မြားမှ ပွနျလညျပွောပွသဖွငျ့ သိရပါသညျ.။
အဆိုပါ ကုမ်ပဏီမြား၏ Marketing သမားမြား ဆကျသှယျခွငျးသညျMyanmarCarsDB.com နှငျ့ လုံးဝ (လုံးဝ) ပတျသကျမှုမရှိဘဲ အခွားသော ကုမ်ပဏီမြားမှ ဆကျသှယျခွငျးသာဖွဈပါသညျ.။ MyanmarCarsDB ၏ Customer မြား စိတျအနှောငျ့အယှကျကငျးစှာ လုပျငနျးမြားဆောငျရှကျနိုငျစရေနျ အဆိုပါကုမ်ပဏီမြား၏ တာဝနျရှိသူမြားသို့ ဆကျသှယျ၍ ဆကျလကျဆောငျရှကျလြှကျရှိပါသညျ.။
MyanmarCarsDB ၏ Customer မြားအနနှေငျ့ ထိုသို့သော ဖုနျးမြားမကွာခဏဆကျခွငျး၊ Email မြားပို့ခွငျး စသညျတို့ ကွုံတှရေ့၍ စိတျအနှောငျ့အယှကျဖွဈပါက ဆကျသှယျသောဖုနျးမြားကို Black list ထညျ့သှငျးခွငျး၊ Email မြားကို Spam အဖွဈထညျ့သှငျးခွငျး စသညျတို့ ပွုလုပျကွပါရနျ လေးစားစှာ တိုကျတှနျးအပျပါသညျ.။
Posted at: 11-05-2015 11:34 AM